कर्पोरेट नेपाल , ३ जेष्ठ २०७७, शनिबार, ०३:४० pm
काठमाडौं । विश्लेषक प्राडा युवराज संग्रौलाले मिसाइल बोकेर बसेको भारतसँग खुकुरी देखाएर अतिक्रमित भूमि फिर्ता नहुने भन्दै तर्क उद्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा केही अघि बोल्दै उनले कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण हुनुमा भारतलाई दोष दिनुको अर्थ छैन भन्दै आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो भने । संग्रौला भन्छन्, ‘सक्छौ भने तर्क उद्याउन, खुकुरी उद्याएर केही हुनेवाला छैन् ।
हामीले प्रमाण पेश गरेपछि भारतले नेपाली भूमि बाध्य भएर छोड्नुपर्छ भन्दै धर नेपाली भूमि दावी गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाणहरु नै परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि अन्य सम्वन्धित् सरकारी निकाय र पदाधिकारीले बेचेर सिध्याइसकेको बताए । यद्यपि यस्ता प्रमाणहरु जुटाउन सकिने र कुटनीति तरिकाबाट जमिन फिर्ता नभएर कानुनी उपायमा जानुपर्ने बताए । नेपाली भूमिमा भारतीय सेना आएर बस्नु सीमा अतिक्रमणको विषय मात्रै नभएर नेपालको सार्वभौमत्तामाथिको अतिक्रमण भएकोले सोही अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सँग्रौलाको तर्क छ ।
उनले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि प्रशासन संयन्त्रलाई नै पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने बताए । संग्रौला भन्छन्, तपाईं हामी हाम्रो देशको नक्सा बेच्छौं, प्रमाण बेच्छौं, पहिला सरकारले प्रशासनलाई करेक्ट गरोस न । के हामी भारतको कुरा गछौं ? जबसम्म देशको प्रशासन जनता लुटेर बस्छ, कर्मचारीका छोराछोरी पीआर र ड्राइभर्सिटी भिसा लिएर बाहिर बसेका छन्, आफू बुढेसकालमा बाहिर बस्दा हेप्छन् भनेर सत्तामा कर्मचारी भएर बसेको छ, तिनीहरु कसैलाई पनि देशको माया छैन् । तपाईं हामी कहिले राजदूतले छोराछोरी बाहिर पठाइदेला भनेर बसेका छौं । सबैभन्दा आशालाग्दा भनिएका ठूला पत्रकार ९ बजे दूतावासमा भात खान पुग्छन् । हामीले के आशा गर्ने ?
साथै, संग्रौलाले कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी पठाउन नसके पनि नागरिक प्रशासन छ भन्नलाई कम्तिमा पनि खरदारलाई भए पनि पठाउनुपर्ने थियो भन्दै त्यो नहुँदा त्यहाँका नागरिकलाई भारतले राशन कार्ड दिएर भारतीय बनाउन सहजै प्रयास गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मुलुकको संसद नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमणनबारे बोलाएर किन कुरा गर्दैनन् ? भन्दै उनले भारतसँग वार्ता गर्ने हो भने सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नभई विज्ञले गर्नुपर्ने र प्रमाणहरु जुटाएर बस्नुपर्ने बताए । किन नेपालका नेताहरु हामीलाई बोलाएर कुरा गर्दैनन ? सँग्रौलाले प्रश्न गरे ।
उनले जुन देशका नागरिक देशप्रति इमान्दार हुँदैनन, त्यो देश बाँच्दैन् । उनले थपे, तपाईंहरु लर्को लागेर डिभी भर्नेका बाबुआमा हौं । तपाईं हामी देशमा खेती गर्न छोडेर बाहिरबाट ल्याएका च्याँग्रा खाने मान्छे हौं । यदि तपाईं हामीलाई नेपाल चाहिँदैन भने नबोलौं ।
सँग्रौलाले नेपाल ३०–३५ सय बर्ष पूरानो रहेको र हाम्रा पीता पुर्खाको खरानी र माटो यो देशमा छ भन्दै थपे – ३५ सय बर्षदेखि पुर्खा गाडिएको देश छोडेर हिँड्न त हामीलाई लाज लाग्दैन भने त्यो अमेरिका र अष्ट्रेलियाले पनि के बुझेको होलान भने ३५ सय बर्ष पूरानो आफ्नो देश धोका दिने यी हरामीहरु कुनै पनि बेला मलाई धोका दिन्छन् भन्ने त्यसलाई थाहा छैन होला ?
देश जोगाउन यतिबेला सरकारलाई बल र दबाब दिनुपर्छ भन्दै त्यति गर्दा पनि अघि बढ्दैन भने त्यो पार्टीमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन भन्दै हामीलाई भारतसँग होइन् यहीं भित्रको प्रशासनसँग डर हो भने । नेपाल भित्रबाटै असुरक्षित रहेको भन्दै अब हरेकले आफ्नो माटोलाई माया गर्ने बेला आएको बताए ।
सीमा अतिक्रमण विषयले संसदमा होहल्ला, ज्ञवाली भन्छन्– सरकार जानकार छ, कुटनीतिक पहल गछौं
प्रधानमन्त्रीको उत्तर– नेपालको नक्सा किन चाहियो ? भूमि नै फिर्ता ल्याउँला नि